Vokarin'i Andy Warhol amin'ny Photoshop haingana sy mora | Famoronana an-tserasera
Vokany Andy Warhol amin'ny Photoshop hahafahanao mahazo izany sary manintona be noho ny fahitana noho ny tsy fitovian'ny loko lehibe atolotray ity vokatra ity. Ny vokatr'i Warhol dia azo atao amin'ny fomba maro, amin'ity tranga ity dia hataontsika amin'ny fomba iray haingana be manolotra vintana avo lenta amin'ny fifehezana ny sary.
Ny lokon'ny jenna dia mifanohitra amin'ny fomba iray mba hahatonga ny sary ho lasa iray manontolo asa kanto, Ity fomba ity dia tena mahaliana ny mampihatra ireo amin'ny sary izay tianay asongadina ny herin'ny loko. Mianara bebe kokoa momba Photoshop manao an'io vokany mahaliana sy mamorona.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika hahazoana izany vokatra izany dia mitady sary izay ahafahantsika mampihatra ny fanovana Photoshop. Amin'ity tranga ity dia nampiasa iray avy tany Warhol izahay.
1 Mitadiava sary iray ho an'ny vokatray
2 Vokatra vokarina
3 Hamafana ny tany ambadika
4 Fenoy loko ny background
5 Manova ny lokon'ny sarinay izahay
6 Vokany hafa
Mitadiava sary iray ho an'ny vokatray
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ataovy ny sarinay am-boalohany mba hahazoana antoka fa manaja ny sary tany am-boalohany isika, raha manao izany dia tsindrio ny kianja eo amin'ny ankavia ambany hita ao amin'ny faritra sosona.
Aorian'ny fandikana ny sosona misy antsika, ny zavatra manaraka tsy maintsy ataontsika dia ny mamorona ny vokarin'ny tokonam-baravarana, hanaovana izany dia tsindrio sary / fanovana / tokonam-baravarana.
Rehefa tsindrio ny safidy ambaratonga, a varavarankely pop-up izay tsy maintsy hanitsiana ny sarintsika, maimaim-poana io dingana io satria arakaraka izay ilaintsika no ampiharinay a vokany bebe kokoa na kely kokoa.
Ny dingana manaraka dia misy fafao ny lafika raha hametaka loko hafa mifanohitra amin'ny sary etsy ambony. Mba hanaovana izany dia mila mifidy fotsiny ny fitaovana famafana majika hita eo amin'ny bara fiasana eo amin'ny ilany havia an'ny Photoshop.
Fenoy loko ny background
Mameno ny volanay vaovao amin'ny sasany izahay loko tototry, mba hanaovana izany dia tsy maintsy mamorona sosona vaovao aloha isika ary apetraka eo ambanin'ny sosona sary tany am-boalohany, aorian'izany dia mifidy ny safidy isika manova / mameno, mifantina ny loko tadiavintsika isika ary ekentsika izany.
Manova ny lokon'ny sarinay izahay
Ny dingana manaraka sy farany dia ny manova ny lokon'ny sarintsika ho mainty, azontsika atao izany amin'ny famenoana izany loko mainty izany loko vaovao na mamorona fanitsiana loko amin'ny sosona, amin'ity tranga ity dia hamorona fanitsiana loko izahay amin'ny fipihana ny menio ambony saturation sary / fanitsiana / hue. Tsindrio ny safidy fandokoana ary safidintsika ny loko marina tadiavinay, azonay atao milalao amin'ny masontsivana Manolotra antsika ity menio ity mandra-pahatongantsika ny vokatra irina.
Afaka mamorona isika vokany hafa miaraka amin'ny fikasihana mitovy amin'izany mifototra amin'ny fampiasana loko ho teboka matanjaka indrindra amin'ny sary. Raha ity ohatra ity dia ampiharintsika loko tasy amin'ny alàlan'ny fampiasana sosona fanitsiana amin'ny maody marobe.
Miaraka amin'ny dingana tsotra vitsivitsy dia nahavita namorona a mahaliana fomba Andy Warhol haingana sy mora rehefa mampiasa fitaovana fototra ao amin'ity programa famerenana nomerika nomerika ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Vokarin'i Andy Warhol amin'ny Photoshop
Isidro Ferrer milalao zavatra hamoronana hafatra vaovao